Baphemba kabusha abakhiqiza izimonyo zesikhumba emva kokuwiswa yiCOVID-19 nezidubedube zangoJulayi. Omunye wabo uxoxe noSLINDILE KHANYILE - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
NGESIKHATHI esabamba amatoho wayehlala efletheni nowesifazane owayenengane eyayihlushwa yisikhumba ine-eczema. Wayinika umuthi wokugcoba ayezihlanganisele wona ngezithako zemvelo wathi akawuzame abone ukuthi ngeke yini uyisize ingane.
Uthi unina womntwana wabonga wanconcoza wathi besekuyiminyaka engabuthi quthu ubuthongo ngoba ingane yayihlale ikhala ngenxa yokulunywa yisikhumba.
Emva kwaloko kwaba wukuzaleka kwebhizinisi lezimonyo zesikhumba i-African Memories kaNkk uMemory Dlamini.
UNkk uDlamini, odabuka eMariannhill, eThekwini, uphethe leli bhizinisi nomyeni wakhe uMnu uNkosinathi Dlamini.
UNkk noMnu uDlamini, abasunguli be-African Memories
Uthi: “Isikhumba sami sasisimbi kodwa ngangithi uma ngibheka ngithole ukuthi imikhiqizo iyabiza. Ngenza ucwaningo, ngathola ukuthi imikhiqizo yemvelo engenawo amakhemikhali njengolamula, ojinja ne-turmeric yiyona elungile.
“Ngazihlanganisela endlini, ngase ngiyaqala ngiyakusebenzisa. Kwaba wumngani wami oqaphelayo umehluko ebusweni bami ngase ngagcina sengidayisa kancane kancane,” kukhumbula yena.
Imikhiqizo yabo inezimonyo zobuso, insipho, amakha nokokukhuculula umzimba.
Eminye yemikhiqizo ye-African Memories
Ibhizinisi lakwaDlamini, elisungulwe ngo-2015, lisukume kakhulu emva kokuthola ithuba lokukhangisa kuKhozi FM ohlelweni olwaluthi Ziphantele, olwaluyingxenye yohlelo lwantambama olwalusakazwa wuTshatsha noSelbyonce. “Sasidayisa umkhiqizo ophakathi kukaR15 000 noR18 000 ngenyanga futhi siqashe abantu abayisithupha ngaphambi kweCOVID-19. Ibhizinisi lalihamba kahle impela.”
Nokho ukuhlasela kobhubhane olwaphoqa ukuthi kuvalwe izwe kwaliwisa ibhizinisi njengoba kwakulukhuni ukuthola izithako zomkhiqizo wabo kanti namakhasimende ayeseyindlala.
Bavuke bazithatha bangena kwelinye ibhizinisi le-network marketing kanti kuthe nakhona sebethi kuntwela ezansi kodwa kwavele kwaphelela emoyeni ngenxa yodlame oluhlasele ngoJulayi.
“Sasisebenzela ngaphandle kwaseShoprite oThongathi kodwa kwaphela konke ngesikhathi kutatshwa ezitolo nokuvele kwenza kwaba nzima kakhulu. Kodwa-ke asikwazi ukuphela amandla.”
Yingakho manje bezama ukuvuselela i-African Memories kanti bazimisele ukusebenzisa izifundo abazifunde kulezi zikhawu ezimbili zokuwa kwebhizinisi labo.
“Ibhizinisi lidinga ukuthi uhlale ulikhangisa ngoba abantu bayalikhohlwa uma lingekho emehlweni abo. Sifundile nangokubaluleka kokukwazi ukudayisa usebenzisa ubuchwepheshe besimanje ukuze kungathi uma izwe livaliwe kusho ukuma kwezinto,” kusho yena.
UNkk uDlamini uthi isifiso sabo wukuthi izimonyo zabo zigcine sezitholakala ezitolo ezinkulu futhi nakwamanye amazwe. Imikhiqizo yabo ibiza phakathi kukaR30 noR200.
Facebook: African Memories